बिगमर्जका रोलमोडल सीईओ कुवँर भन्छन्:- "हामी फायरपावर खोल्ने तयारीमा छौं" - नेपालबहस
| १५:२०:४२ मा प्रकाशित
स्पष्ट र खरो स्वभावका बैंकर परशुराम कुवँर क्षेत्री यतिबेला बिगमर्जको रोलमोडल सीईओ बनेका छन् । करिब तीन दशकको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ अनुभव सम्हालेका सीईओ कुवँरले देशकै ठूलो बाणिज्य बैंक ग्लोबल आईएमई बैंकको व्यवस्थापकीय नेतृत्व हाँक्ने अवसर प्राप्त गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक ल्याएको बिगमर्जको अवधारणलाई सर्हष स्वीकार गरि पाँच महिनाको छोटो अवधि मै निजी क्षेत्रका दुई ठूला बाणिज्य बैंकहरु जनता बैंक र ग्लोबल आईएमई बैंकलाई मर्ज गराएर संयुक्त कारोबार शुरु भैसकेको छ । तत्कालिन संयुक्त विदेशी लगानीको इण्डोस्वेज बैंक हाल स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकबाट आफ्नो बैंकिङ क्यारियर शुरुवात गरेका कुवँरले सिटिजन्स बैंकको महाप्रबन्धक हुदै बैंक अफ एशिया, ग्राण्ड बैंक र जनता बैंकको सफल सीईओको रुपमा कुशलतापूर्वक कार्यसम्पादन गरिसकेका छन् ।
राष्ट्र बैंकको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्र्तगत विदेशी व्यवस्थापनसँग नेपाल बैंक लिमिटेडको उच्च तहमा रही सफलतापूर्वक काम सम्पन्न गरिसकेका कुवँर नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा हक्की र इमान्दार बैंकरका रुपमा समेत परिचित छन् । यिनै बैंकर कुवँरसँग बिगमर्जको अनुभव,अवसर र चुनौती सँगै बैंकका भावी योजनाहरुका बारेमा नेपालबहस डटकमका प्रधान सम्पादक इन्द्र रिजालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
राष्ट्र बैंकको बिगमर्ज नीतिपछिको पहिलो बिगमर्ज छोटो अवधिमै सफल बनाउनु भएको छ । पूँजीदेखि निक्षेप, कर्जा लगानी लगायत सबै हिसाबमा ठूलो बैंकको सीईओका रुपमा बैंक हाँक्न के कस्ता भावी योजनाहरु बनाउनु भएको छ ? बैंकिङ क्षेत्रमा ग्लोबल आईएमई बैंकले कस्तो सीर्नजी ल्याउदै छ ?
हामीहरुले पाँच महिनाको छोटो अवधि मै बिग मर्जर चाहिँ सफल गर्यौं । तर म चाहिँ काम आधा पनि भएको छैन भन्न रुचाउँछु । किनकी अब हामी मर्जपछिका काम शुरु गर्न गईरहेका छौं । दुई ठूला बैंक मर्ज भएर ठूलो बैंक बनेपछि सबै तिरबाट आशा र कौतुहलता बढेको छ । सबै सेक्टरहरु जस्तो सरोकारवाला, ग्राहक, शेयरधनी, कर्मचारी, रेगुलेटरदेखि सिङ्गगो समाजले नै यस बैंकबाट ठूलो आशा राखेका छन् । तर अब त्यो आशाको परिपूर्तिका लागि हामी कटिबद्ध भएर लाग्नुपर्ने स्थिती छ ।
सबैको आशा र विश्वासलाई छुनको लागि हामीसँग फायरपावर छ । म्यानेजमेन्टको स्ट्रेन्थ अन्य नेपाली बैंकको दाँजोमा हाम्रो दह्रो छ । लामो अनुभव भएका डीपुटी सीईओहरु दुई जना, डीजीएम तीन जना, एजीएम दुईजना, थुप्रै चीफ म्यानेजर, सिनियर म्यानेजर, म्यानेजर लगायतको परिपक्क टीम छ । क्वालिटेटिभ् स्ट्रेन्थ भएका व्यक्तिहरु हामीसँग छन् । सबै स्टेकहोल्डरहरुको संरक्षण गर्दै उहाँहरुको हित, चाहनालाई सम्बर्धन र अभिवृद्धि गर्ने ल्याकत हामीसँग छ ।
त्यसको सोझो अर्थ भनेको जसले राम्रो काम गर्छ, पर्फमेन्स् राम्रो गर्छ, त्यसलाई हामी च्याप्छौं । जसले राम्रो काम गर्दैन, पर्फमेन्स दिँदैन, त्यसलाई हामी चाप्दैनौं । झ्याप्छौं, फायर गछौं । सबैले मिहेनत गरेर काम गर्नुपर्यो भन्ने नै हो ।
जहाँसम्म योजनाको कुरा गर्नुभएको छ, हामीले फोकस गर्ने पहिलो काम भनेको डीजीट्लाईजेशन नै हो । दोस्रो, प्रक्रियागत झण्झटलाई कम गर्दै ग्राहकहरुलाई छिटो, छरितो सेवाप्रवाहमा ध्यान दिने प्रयासमा छौं । तेस्रो, रिक्स म्यानेजमेन्टका कुराहरु पनि छन् । बैंक ठूलो भएसँगै यसको जोखिम पनि बढेको छ । त्यो जोखिम व्यवस्थापनका लागि हामीले प्रभावकारी काम गरिरहेका छौं । हामीसँग भएको म्यानेजमेन्ट स्किलबाट यस्ता कामहरु सहजै गर्न सक्छौं ।
१८ वटा विभिन्न प्रकृतिका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मिलेर ग्लोबल आईएमई बैंक बनेको छ । कर्मचारीदेखि कर्जा असुलीको व्यवस्थापन कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?
सबै स्टेकहोल्डरहरुको इन्ट्रेस्ट प्रोटेक्ट गर्ने भनेपछि त त्यसमा कर्मचारी पनि आईहाल्छ । कर्मचारीलाई हामीले प्रशिक्षणले ह्याण्डल गर्नु पर्यो । उहाँहरुको क्यारियरको विचार गरिदिनुपर्यो । म आफुले कार्यभार सम्हालेकै दिनमा सबै कर्मचारीलाई एउटा इमेल पठाएर सन्देश दिएको छु । त्यो इमेलमा कर्मचारीहरुलाई खाली आफ्नो पर्फमेन्समा ध्यान केन्द्रित गर्न अनुरोध गरेको छु । अरु कुराहरु बैंक व्यवस्थापनको उच्च टीमलाई छोड्दिनुहोला भनेको छु ।
कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तालिमका लागि बैंकले छुुट्याएको ३ प्रतिशत रकमको तल्लो लेवलसम्म प्रभावकारी लागू नभएको कुरा उठेको छ । त्यस बारे के योजना बनाउनु भएको छ ?
पहिलो कुरा पछिल्लो समय बैंकिङ फ्रडहरु भईरहेका छन्, रिक्सहरु आईरहेका छन् । संसारभरि नै डीजीटल रिक्स बैंकिङ क्षेत्रको टाउको दुखाईको विषय बनेको छ । हामी भन्दा फ्रडहरु एक कदम अगाडि छन् । जरुरी के छ भने फ्रडहरु भन्दा हामी एक कदम अगाडि हुनुपर्ने आवश्यकता छ । रिक्स म्यानेजमेन्टमा हामी बहस गछौं ।
हरेक क्रियाकलाप गर्दा के जोखिम छ, त्यसबारे छलफल गर्ने, बहस गर्ने, कुराकानी गर्ने र त्यस जोखिमलाई उचित व्यवस्थापन कसरी गर्न सक्छौं ? त्यसका लागि पनि नीति बनाउने । नीति बनाएपछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लानु पर्यो । कार्यान्वयन त कर्मचारीले गर्ने हो । नीति त राम्रो बनाउनु भएको छ । तर, कार्यान्वयन गर्न सक्नु भएन भने ? हो, त्यसका लागि तपाईले भनेको जस्तो कर्मचारीलाई समयानुकुल तालिम दिनुपर्यो ।
दोस्रो जोखिम व्यवस्थापनको छ । के कुरामा जोखिम आईपर्छ भन्ने कुरा पहिचान गर्नुपर्छ । पहिचान भएका जोखिमलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । एउटा नीति बनाएर जोखिम व्यवस्थापनका लागि कार्यान्वयनमा जानु पर्यो । कार्यान्वयनमा जानका लागि कर्मचारीलाई तालिम दिनुपर्यो । अनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि हाम्रो अडिट टीमलाई सशक्त र बलियो बनाउनु पर्यो । यी सबै कुराहरुमा हामी लाग्दै छौं । त्यसका लागि हाम्रो बैंकमा स्ट्रेन्थ छ ।
मानीलिउँ, एउटा बैंकमा २० जना अडिटको टीम छ । अर्को बैंकमा पनि २० जना अडिटको टीम छ भने अब ४० जना अडिट त हामीलाई चाहिँदैन । ४० जना भन्दा कम जनशक्तिले पनि त्यो काम गर्नसक्ने खण्डमा त्यहाँ उभ्रिएका, बढी भएका कर्मचारीहरुलाई अन्य काममा हामी लगाउँछौं । रियुज गर्ने हो ।
जनता र साविकको ग्लोबल आईएमई दुवै बैंकलाई यो मर्ज भन्ने कुरा दालभात तरकारी खाएजस्तै हो । अरु–अरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई बिग मर्जर के–के नै हो ? चन्द्रमाबाट नै ल्याएको चीज जस्तो भयो होला । तर यी दुईवटा बैंकमा न त बोर्डलाई, न त व्यवस्थापनलाई न त सामान्य कर्मचारीलाई मर्ज नयाँ भन्ने भएन ।
के ओभर स्टाफिङ भएका हुन् र ?
हो, डिपार्टमेन्ट लेवलमा त ओभर स्टाफिङ हुन्छ नै । अब हामीले त्यस्ता स्टाफहरुलाई अरु एरियाहरु जस्तै विजनेश विस्तार, रिक्स म्यानेजमेन्ट, डीजीटलाईजेशन लगायतका अन्य ठाउँमा परिचालन गर्ने हो ।
भीएसआर किन ल्याउनु भएन ?
हामीले भीएसआर अहिलेसम्म ल्याएका छैनौं । ल्याउने या नल्याउने भन्ने कुरा हुँदैछ । सायद २-४ महिनापछि ल्याइन्छ कि !
यो त मर्ज अगावै गर्नुपर्ने होइन र ? ५ महिनामा मर्ज सक्नुभयो । मर्जका राम्रा पक्ष, चुनौती र अवसरहरु के के रहेछन् ?
मर्जपछि भीएसआर ल्याउँदा पनि हुन्छ । ५ महिनामा मर्ज सकियो । साविकको जनता र साविकको ग्लोबल आईएमई दुवै बैंकलाई यो मर्ज भन्ने कुरा दालभात तरकारी खाएजस्तै हो । अरु–अरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई बिग मर्जर के–के नै हो ? चन्द्रमाबाट नै ल्याएको चीज जस्तो भयो होला । तर यी दुईवटा बैंकमा न त बोर्डलाई, न त व्यवस्थापनलाई न त सामान्य कर्मचारीलाई मर्ज नयाँ भन्ने भएन ।
दोस्रो कुरा हामीले असार २० गते मर्जको लागि एमओयु गरेको हो । असारमा खासै काम त भएन । आर्थिक वर्षको अन्त्यको समय थियो । २१ गते शनिवार थियो । तर २२ गतेबाट नै दुवै बैंकका आईटी टीमहरु लागेका थिए । मर्जका लागि हामीले साउनबाट मात्र काम थालेका हौं । लाग्छ, साउनको २ गते पहिलो मिटिङ भएको थियो । २ गतेबाट दुवै बैंकको म्यानेजमेन्ट टीमबाट नै कुराकानी एवं छलफल शुरु भएको थियो ।
मैले तपाईको यस लोकप्रिय संचारमाध्यमबाट गर्व गर्छु कि हाम्रा साथीहरु मर्जका लागि खट्नु भएको छ । खास गरेर हाम्रो आईटी डीपार्टमेन्टका साथीहरुले त न बिदा भन्नुभएको छ, न त शनिवार भन्नुभएको छ, न त दशैं तिहार भन्नुभएको छ । बिदा, दशैं तिहार चाडवाड केही नभनी लगातार खट्नु भएको छ ।
साविकको जनतामा फेस्क्युव सिस्टम थियो भने साविकको ग्लोबलमा फिनाकल थियो । ग्लोबलको फिनाकल सिस्टमलाई पहिला लेटेस्ट भर्सनमा अपग्रेट गरेर साविकको जनताको फेस्क्युब डाटा माईग्रेट गरेर फिनाकलमा ल्याइएको थियो । यो चानेचुने काम थिएन । यो ५-६ महिनामा सजिलै हुने काम होइन । हाम्रो सिस्टम अझैं अपग्रेट गर्दै छौं । यो लागिपरेर गरिएको मर्जर हो ।
मर्जर गर्ने भनेर हात बाँधेर बसेर मर्जर हुनेबाला थिएन । मर्जर गर्ने भनिसकेपछि यो छिटो नै सक्नुपर्छ । जति ढिलो गर्नुहुन्छ, उति नै अनिश्चित हुन्छ । मानिसहरुको दिमागमा अनेक किसिमका आशंका पलाउन सक्छन्-आउन सक्छन् भन्ने कुरामा हामी सचेत थियौं । हामीले त्यो कुरा बुझेर नै सचेत भएर रफ्तारमा काम गरेका हौं । अहिले मर्जर सकिसकेको छ । पोस्ट मर्जरका केही इस्यूहरु छन् । ती धेरै ठूलो समस्या होइनन् । बिगतमा पनि कतिपय बैंकहरुलाई डेढदेखि दुई वर्ष मर्जका लागि लागेकै हो । साविकको जनता मर्ज हुँदा पनि दुई वर्ष भित्र नै मर्जर व्यवस्थापन गरेका हौं ।
हाम्रो पहिलो त्रैमासिक रिपोर्ट हेर्नुभयो भनेपनि हामी सबैभन्दा बढी मुनाफा कमाउने निजी क्षेत्रको वाणिज्य बैंक हो । साविकको जनता र साविकको ग्लोबल आईएमईको मुनाफा जोड्दा पनि सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र मर्जपछिको ग्लोबल आईएमईको मुनाफामा जम्मा ३५ लाखको फरक छ । लोन र डिपोजिट पनि हाम्रो नै धेरै छ । पहिलो क्वाटरको रिपोर्ट अनुसार प्राइभेट सेक्टरको वाणिज्य बैंकहरुमा ग्लोबल आईएमईको मुनाफा सबैभन्दा बढी नै छ ।
साविकको जनता भन्दा पनि साविकको सिद्धार्थ र त्रिवेणीबाट राम्रो विजनेश आएको हो । त्यो पनि हामीले २ वर्षभित्र नै व्यवस्थापन गरेका हौं । मलाई लाग्छ, नेपालमा मर्जर व्यवस्थापन गाह्रो छैन । सबैले नेपाली भाषा बोल्छौं । भाषामा समस्या छैन । हिजो पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना गरेका थियौं । आज पनि पालना गर्ने नै छौं । काम गर्ने कागजपत्र जुन ऋण स्वीकृतिका चिठीदेखि लिएर, ऋणका तमसुकहरु लिएर सबै मालपोत नै जाने हो ।
सबै बैंकको उस्तै–उस्तै छन् । एउटै भ्यालुएटरले विभिन्न बैंकका भ्यालुएटर भएर काम गरिरहेका छन् । त्यसकारण धेरै फरक छैन । कर्मचारीहरु पनि हरेक वर्षमा १२ देखि १५ प्रतिशतसम्मको टर्नओभर भईरहेका देखिन्छ । पुराना कर्मचारी रिटायर्ड भएर जाने र त्यसमा नयाँ कर्मचारीहरु आउने भईरहेको छ । ओभर स्टाफलाई हामीले व्यवस्थापन गर्ने हो ।
बिगमर्जका चुनौतीहरु के के रहेछन् ?
ठूलो आशा गरिएको छ । त्यो नै पुरा गर्नु अहिलेको चुनौती हो ।
बैंकिङ सेक्टरमा यो बिगमर्जरलाई भ्यागुत्ते छलाङ पनि भनिएको सुनिन्छ नि ?
म त्यस्तो खालको सस्तो कमेन्टहरुको प्रतिक्रिया दिन चाहन्न । कसले, किन, कुन कन्टेक्समा भन्यो हामीलाई थाहा छैन । हामी बलियो र सबल भएका छौं । सक्षम बनाएर चौतर्फी विकासमा लागिपर्छौं । त्यसका लागि हामीसँग फायर पावर छ ।
अहिले पनि नेपालमा तपाईहरु भन्दा पुराना र सबल बैंक त छन् । बोनस र लाभांश पनि राम्रो दिईरहेका बैंकहरुलाई उछिन्न कति सहज होला ?
आउने साल नै फट्ट हामी सबैलाई उछिन्छौं भन्नु काल्पनिक कुरा हो । हाम्रो पहिलो त्रैमासिक रिपोर्ट हेर्नुभयो भनेपनि हामी सबैभन्दा बढी मुनाफा कमाउने निजी क्षेत्रको वाणिज्य बैंक हो । साविकको जनता र साविकको ग्लोबल आईएमईको मुनाफा जोड्दा पनि सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र मर्जपछिको ग्लोबल आईएमईको मुनाफामा जम्मा ३५ लाखको फरक छ । लोन र डिपोजिट पनि हाम्रो नै धेरै छ । पहिलो क्वाटरको रिपोर्ट अनुसार प्राइभेट सेक्टरको वाणिज्य बैंकहरुमा ग्लोबल आईएमईको मुनाफा सबैभन्दा बढी नै छ ।
बिगमर्ज पछि यिनीहरुले के गर्छन, के गर्दैछन् भनेर हेरिरहेका होलान् । हामी त्यस कुरामा सचेत छौं । हाम्रा सरोकारवालाहरुले हामीमाथि गर्नुभएको सकारात्मक आशाप्रति निरन्तर लागि पर्ने छौं र सफलता हात पार्ने कोशिशमा छौं । सरोकारवालाहरुले गर्नुभएको भरोसा र हाम्रो जिम्मेवारीप्रति हामी पूर्णविश्वासका साथ काम गरिरहेका छौं । हामीले सफलता हात लगाएर नै छोड्ने हो ।
अब आउँदा दिनहरुमा हाम्रा केही खर्चहरु अवश्य नै छ । सिस्टम राइटअपका खर्चहरु, २८-३० वटा ब्रान्चहरु गाभ्ने तयारीमा पनि छौं । कर्मचारी व्यवस्थापन, स्टेशनरी खर्चहरु लगायत त छन् । आज मर्ज गर्यौं भोलि नै जादुको छडी हुदैन् । एकदमै चमत्कारै हुन्छ भन्ने आशा कसैले पनि गर्नुभएको छैन । तर एक-दुई वर्षमा हामी देशको एउटा सबल र सक्षम बैंक बनेर अगाडि आउने छौं ।
फोर्स मर्ज नभएर यो बैंक स्वेच्छिक बिगमर्जको उदाहरण बनेको छ । अन्य निजी क्षेत्रका बैंकलाई कस्तो सन्देश गए जस्तो लाग्छ ?
मलाई लाग्छ, हामीले पर्फम राम्रो गर्दै गयौँ भने अरु निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले पनि उदाहरणको रुपमा लिन सक्छन् । हामीले राम्रो गरेनौं भने अरु बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि मर्जर त राम्रो होइन रहेछ भन्ने सन्देश जानसक्छ । त्यसैले सबै कुराहरु हाम्रो पर्फमेन्सले निर्धारण गर्ने हो । अब आउँदा दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने प्रेसर हामीलाई छ । हामीलाई थुप्रै प्रेसर छ ।
त्यसकारण अझै राम्रो गर्नुपर्ने छ । दुई जोड दुई चार भन्दा बढी हुनैपर्छ । दुई जोड दुई चार पटक्कै पर्याप्त छैन । यो स्वीकार्य छैन । दुई जोड दुई मोर द्यान फोर बनाएर देखायौं भने मात्र अरु बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि बिगमर्ज गर्दै व्यापार बढाउन प्रेसर पर्छ । राष्ट्र बैंकले पनि देख्याैं, बिगमर्ज भएको कारणले गर्दा त्यस बैंकले राम्रो प्रगति गर्यो नि भनेर उहाँहरुले पनि देखाउन पाउनुहुन्छ ।
अब राज्यले हाम्रो कुराहरु सुनेर जतिपनि मुद्दाहरु बैंकर संघले उठाएको छ त्यो मुद्दाहरु राज्यले सम्बोधन गर्ने छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ । यस्ता सुधारहरु गरिसकेपछि सबै बैंक तथा निजी क्षेत्रहरुको त्यस कोषप्रति उत्साहजन सहभागिता हुने र योगदानहरु पठाउनेमा हामी पनि ढुक्क छौँ ।
त्यसकारणले मलाई लाग्छ, मार्केटले हामीलाई सुक्षम रुपले हेरेर बसेको होला । बिगमर्ज पछि यिनीहरुले के गर्छन, के गर्दैछन् भनेर हेरिरहेका होलान् । हामी त्यस कुरामा सचेत छौं । हाम्रा सरोकारवालाहरुले हामीमाथि गर्नुभएको सकारात्मक आशाप्रति निरन्तर लागि पर्ने छौं र सफलता हात पार्ने कोशिशमा छौं । सरोकारवालाहरुले गर्नुभएको भरोसा र हाम्रो जिम्मेवारीप्रति हामी पूर्णविश्वासका साथ काम गरिरहेका छौं । हामीले सफलता हात लगाएर नै छोड्ने हो ।
पछिल्लो अवस्थामा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा विवादहरु आईरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले अर्थमन्त्रालयको दवावमा काम गरेको, सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत सरकारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरु त्यसमा पनि बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो विभेद गरेको कुराहरु बाहिर आएका छन् नि ?
साविकका जनता र ग्लोबल दुवै बैंक सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुचीकृत भईसकेका छौं तर हामीले सरकारले तोकेको रकम पठाउन शुरु गरेका छैनौं । निश्चित रुपमा सामाजिक सुरक्षाको कुरा आईरहेको छ, यो अन्य विकशित देश क्यानाडा,अमेरिका तथा युरोपियन देशहरुमा ११०-११२ वर्ष अगाडि नै आईसकेका र लागू भईसकेका कुरा हुन् । हाम्रो देशमा १०० वर्षपछि आउँदा पनि एकदम नयाँ भईरहेको छ ।
यो राम्रो कन्सेप्ट हो । यसमा धेरै तयारी भएर आएको छ । तर त्यसमा केही कैफियतहरु चाहीँ छन् नै । त्यस्ता कैफियत इस्युहरु हामीले बैंकर्स एशोसिएशनबाट पनि संशोधनका लागि पठाएको छौं । सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यविधिले कर्मचारीहरुको खाईपाई आएको सुविधाहरुलाई हटाइदिनु भएन भन्ने लगायत धेरै विषयहरु छन् । पूर्वमन्त्री गोकर्ण विष्ट हुँदा नै बैंकरहरुको एउटा टोली डेलिगेशनमा गएको थियो । त्यसमा म पनि थिएँ । मन्त्रीज्यूले पनि हाम्रो कुरा राम्रोसँग सुनेर हामी हेर्छौँ । राम्रोसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने आश्वासन दिनुभएको थियो ।
त्यसपछि हामीले हाम्रो कैफियतहरु र कुन कुन कुराहरु सुधार गर्नुपर्ने थिए, लेखेर नै पनि पठाएका थियौं । कर्मचारीहरुलाई मर्का पर्ने काम गरिदिनु भएन । हामीले हाम्रो मात्रै कुरा गरेका होइनाैं । अन्य निजी क्षेत्रका कर्मचारी तथा संघसंगठनबाट पनि यही कुरा र असन्तुष्टि आएको छ । अब राज्यले हाम्रो कुराहरु सुनेर जतिपनि मुद्दाहरु बैंकर संघले उठाएको छ त्यो मुद्दाहरु राज्यले सम्बोधन गर्ने छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ । यस्ता सुधारहरु गरिसकेपछि सबै बैंक तथा निजी क्षेत्रहरुको त्यस कोषप्रति उत्साहजन सहभागिता हुने र योगदानहरु पठाउनेमा हामी पनि ढुक्क छौँ ।
नेपालमा बारम्बार आउने तरलता अभावको समस्या बिगमर्ज पछि अलि सहज होला त ? वा नयाँ क्षेत्रहरु खोज्ने केही तयारी छ ?
हाम्रो उद्घाटनको कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीले पनि यस कुरालाई अवगत गराउनु भएको थियो । अब हामी यति ठूलो बैंक बनिसक्यौं । हामी ठूलो बैंक बनिसकेपछि विदेशी ऋणहरु ल्याउन पनि अब हामीलाई अझ सहज भएको छ । विदेशीले पनि हामीलाई पत्याउने मजबुत अवस्था बनेको छ । साविकको ग्लोबल आईएमई बैंकले मर्जर अगाडि नै आईएफसीबाट २ करोड डलर ऋण लिई नै सकेको छ र अब आउँदा दिनहरुमा अरु फाइनान्सियल इन्टिच्युसनसँग विदेशी ऋण वा निक्षेप लिन सक्ने क्षमता हाम्रो बनेको छ ।
त्यस्तो अवस्थामा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था भन्दा ग्लोबल आईएमई बैंक नै विदेशी संस्थाहरुको नजरमा पर्न सक्छ । विदेशी संस्थाहरुले संचालनमा रहेका ठुला बैंकहरुलाई नै पत्याउने हो । त्यसकारण मर्जरको फाइदा नै हुन्छ । विदेशीहरुसँग हाम्रो बार्गेनिङ क्षमता पनि बढ्छ । ठूलो संस्थाको व्यालेन्ससीट पनि ठूलो नै हुन्छ ।
निक्षेप संकलनमा केलाई बढी फोकस गर्ने तयारी छ ?
डिभेन्चर चाहिँ अलिकति आउट स्ट्यान्डीङ छ । अरु पनि डिभेन्चर जारी गर्ने कुरा गरिरहेका छौं । त्यो भन्दा पनि विदेशी ऋण, विदेशी बजारबाट पनि पैसा लिनसक्ने क्षमता हाम्रो बनेको छ । तुलनात्मक रुपमा नेपालका अन्य बैंकहरुमा भन्दा हामीसँग धेरै शेयरधनी, अधिक डिपोजिट र कर्जा परिचालन छ । त्यो पनि निजी क्षेत्रको धेरै शाखा सञ्जाल भएको बैंक, दक्ष कर्मचारीहरु भएको कारणले हामीलाई विदेशी ऋणदाताले पत्याउलान् भन्ने हो ।
त्यसकारण मर्ज भएर ठूलो बैंक भएको फाइदा छ । हुन त हाम्रो देशका लागि मात्र हामी ठुला हौं । बाहिरको परिस्थितिलाई दाँज्ने हो भने त हामी साना नै हौं । त्यहीपनि संसारमा साना बैंकलाई भन्दा संचालनमा रहेका ठुला बैंकहरुलाई नै विदेशी संस्थाले पत्याउने हो ।
र अर्को कुरा नेपाल सरकारले आईएफसीलाई नेपाली रुपैयाँको बण्ड विदेशमा जारी गर्न स्वीकृति दिएको छ । यो कुरा त समाचारहरुमा पनि आईसकेका छन् । यस कुराले नेपाली बण्ड जारी भएर विदेशबाट पैसा उठाउने काम सफल भयो भने हामी नेपाली बैंकहरुले पनि विदेशमा गएर नेपाली रुपैयाँको बण्डमा लगानी गर्ने अवसर मिल्ने छ ।
त्यस्तो अवस्थामा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था भन्दा ग्लोबल आईएमई बैंक नै विदेशी संस्थाहरुको नजरमा पर्न सक्छ । विदेशी संस्थाहरुले संचालनमा रहेका ठुला बैंकहरुलाई नै पत्याउने हो । त्यसकारण मर्जरको फाइदा नै हुन्छ । विदेशीहरुसँग हाम्रो बार्गेनिङ क्षमता पनि बढ्छ । ठूलो संस्थाको व्यालेन्ससीट पनि ठूलो नै हुन्छ । त्यसतर्फ पनि हामीले सोचिरहेका छौं ।
नेपाली बैंकहरुले पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ब्रान्चहरु खोल्ने कुराहरु भईरहेको छ, यसतर्फ ग्लोबल आईएमई बैंकको के कस्तो योजना छ ?
त्यसका लागि स्वीकृति चाहिन्छ । त्यो कुराहरु भईरहेको छ । हाम्रो देशको पनि त्यसमा स्वीकृति हुनपर्छ र सम्बन्धित देशले पनि स्वीकृति दिएको खण्डमा विदेशमा शाखा खोल्न सकिन्छ । अहिल्यै पनि हाम्रा प्रतिनिधि कार्यालयहरु विदेशमा छन् । तर शाखाहरु चाहिँ छैन । शाखा खोल्ने पहलमा हामी छौँ । यो प्रक्रियामा नै छ ।
नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा ग्लोबल आईएमई बैंकको ऋण लगानीको प्राथमिकताको क्षेत्र कुन हो ?
सबै क्षेत्रहरु हाम्रा प्राथमिकताका क्षेत्र हुन् । सबै क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । खास गरेर साविकको जनता र साविकको ग्लोबल आईएमईले पनि कृषिका क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको थियो । अहिले पनि यस क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम मापदण्ड भन्दा धेरै लगानी छ । हाम्रो ३०० वटा शाखाहरु ७७ जिल्लामा पुगेको छ । कृषि नै नेपालको कुल ग्राह्यस्र्थ उत्पादनको मेरुदण्ड बनेको परिप्रेक्षमा यस क्षेत्रमा ऋण त दिनै पर्छ । अधिकांश मानिसहरु यसै क्षेत्रमा निर्भर छन् । त्यही क्षेत्रमा उनीहरुले जागिर पाइरहेका छन् । त्यस क्षेत्रमा हामीले लगानी नगरिकन बस्न मिल्दैन । सोहीकारण त्यसका लागि हामीले मर्जपछि छुट्टै विभाग नै खोलेर कृषि क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने सोच बनाएका छौं ।
भनेपछि आमकिसानहरुले ग्लोबल आईएमई बैंकबाट सहज रुपमा ऋण पाउँछन् त ?
निश्चय नै पाउँछन् । नत्र भने हाम्रो ३०० वटा ब्रान्च ७७ जिल्लामा भएको कुनै अर्थ नै भएन नि । त्यसभन्दा बाहेक २५० को हाराहारीमा ब्रान्चलेस बैंकिङ पनि संचालनमा छन् । यिनै शाखा संजालबाट कृषकहरुसँग सम्पर्क स्थापना गरेर, पहुँच बढाएर काम गर्ने छौँ । यत्रो शाखा संजाल भएको बैंकले अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको कृषि क्षेत्रमा योगदान र लगानी नगरिकन बस्न मिल्दैन । संसारको कुनैपनि बैंकले हेर्ने चिज भनेको मैले ऋण दिइसकेपछि त्यो ऋण फिर्ता आउँछ कि आउँदैन भन्ने नै हो ।
अरुले जुन क्षेत्रमा लगानी गरेर मनग्य मुनाफा कमाई रहेका छन् त्यही क्षेत्रमा लगानी हालेर मुनाफा कमाउने प्रलोभनमा लाग्नेहरु धेरै छन् । त्यसरी देखासिकी र लहडमा ऋण लिएर कुनै अनुसन्धान र बजारको स्कोप नै नहेरी लगानी गर्नु जोखिमपूर्ण हुनपुग्छ । मैले यो काम गर्दा यसरी मुनाफा हुन्छ । यति मुनाफा हुन्छ भन्ने हिसाबकिताब गरेर मात्र ऋण लिने र लगानी गर्ने गर्नुपर्छ ।
हामीले पनि हेर्ने त्यही हो । किनकि सर्वसाधारण जनताको डिपोजिट हामीले लिएका हुन्छौं । त्यही डिपोजिटलाई हामीले ऋणस्वरुप लगानी गरेका हुन्छौं । त्यसकारण हामी के कुरामा सहमत हुनुपर्छ भने हामीले दिएको ऋण लगानी गरेर लागानीकर्ताले आम्दानी गर्नुपर्छ । आम्दानी गरेर, खर्च कटाएर, मुनाफा कमाएर हामीसँग लिएको ऋण तिर्नुपर्छ । हामीले हाम्रा किसानहरुलाई र ग्राहकहरुलाई पनि त्यसरी नै सहमत गराउन पर्यो ।
बैंकबाट ऋण लिएपछि तपाईहरुले लगानी गरेर मुनाफा कमाउनु पर्छ हैं । मुनाफा हुँदैन भने तपाईहरु यो काम नगर्नुहोस् । मुनाफा कसरी हुन्छ, त्यो कुरा बैंकलाई बताउनुहोस्, मुनाफा हुने कुरामा बैंकलाई सहमत गर्नुहोस् र आफु पनि सहमत र मुनाफा हुन्छ भन्ने कुरामा ढुक्क हुनुहोस् । अनि मात्र बैंकले ऋण दिन्छ । संसारभरीको बैंकको प्रचलन नै त्यही हो । कृषिमा मात्र नभए अन्य क्षेत्रमा ऋण दिने कुरामा पनि हाम्रो बैंकले मुनाफा हुने सुनिश्चित गरेपछि मात्र ऋण दिन्छ ।
हामीले साना ऋणीहरुलाई सिकाउनु पर्छ । किनकि नेपालमा अरुले मुनाफा कमाएको देखासिकी गरेर बैंकबाट ऋण लिने र अरुले जुन क्षेत्रमा लगानी गरेर मनग्य मुनाफा कमाई रहेका छन् त्यही क्षेत्रमा लगानी हालेर मुनाफा कमाउने प्रलोभनमा लाग्नेहरु धेरै छन् । त्यसरी देखासिकी र लहडमा ऋण लिएर कुनै अनुसन्धान र बजारको स्कोप नै नहेरी लगानी गर्नु जोखिमपूर्ण हुनपुग्छ । मैले यो काम गर्दा यसरी मुनाफा हुन्छ । यति मुनाफा हुन्छ भन्ने हिसाबकिताब गरेर मात्र ऋण लिने र लगानी गर्ने गर्नुपर्छ ।
नेपालमा संचालनमा रहेका ठुला व्यापारिक घरानालाई मात्र ठूला बैंकहरुले मेमोको भरमै ऋण दिने तर साना व्यवसायीलाई ऋण दिन आनाकानी गर्ने चलन पुरानै हो । नेपालमा प्रोजेक्टबेसमा भन्दा पनि धितोबेसमा मात्र ऋण दिने चलन छ । यस कुरालाई तपाईहरुले चिर्न सक्नुहोला त ?
हाम्रो बैंकको कुरा गर्नुहुन्छ भने कर्पोरट सेक्टरमा ऋण लगानी धेरै छैन । साना तथा खुद्रे ऋणहरु नै हाम्रा धेरै छन् । हाम्रो बैंकको ३० प्रतिशत मात्र कर्पोरेट सेक्टरमा ऋण लगानी छ भने ७० प्रतिशत साना ऋणीहरु नै छन् । मर्ज हुनुभन्दा अगाडी पनि यी दुवै बैंकको ऋण लगानी कर्पोेरेट क्षेत्रमा ३० प्रतिशत र साना तथा खुद्रे ऋणहरु ७० प्रतिशत नै थियो र अहिले पनि त्यहि नै छ ।
ग्लोबल आईएमई भनेको १८ वटा साना साना बैंक तथा वित्तीय संस्थाको समागम भएको संस्था हो । ती साना संस्था र डेभलपमेन्ट बैंकले सानो ऋण नै प्रवाह गरेका थिए । त्यहि ऋण नै अहिले निरन्तर परिचालन भईरहेका छन् । संस्था ठूलो भएपनि ग्राहक त तिनै व्यक्ति र संस्थाहरु नै त हुन् नि । जनताको पनि त्यहि हो । ७ वटा साना बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मिलेर बनेको हो । तिनै साना बैंक र ब्रान्चहरुबाट स–सानो ऋण लगानी भएका थिए । संस्था मर्ज भएर ठूलो हुँदा पनि ऋण भने सानो नै परिचालन भएको थियो ।
त्यसकारणले गर्दा नै बिग मर्जर भएपनि अरु बैंकको तुलनामा हामीसँग साना ऋणीहरु धेरै छन् कर्पोरेट ऋणी कम नै छन् । त्यसैले अबका दिनमा पनि यिनै साना ऋणीहरुलाई निरन्तरता दिने सोचमा हामी छौं ।
आम मानिसमा के डर छ भने ठूलो बैंक भएपछि साना ऋणीहरुले ऋण नपाउने हो कि, साना उद्यमीहरुलाई ठुला बैंकले ऋण नदिने हो कि भन्ने आशंका छ अर्कोतर्फ नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा त्यो खालको ट्रेण्ड पनि विद्यमान छ । यो प्रवृतिलाई कसरी तोड्न हुन्छ ?
निश्चय नै तपाईले भन्नु भएको यस्तो सोचलाई हामी तोड्छौं । किनभने हामीले संचालनमा रहेका शाखाहरुलाई बन्द गर्ने त होइन नि । ती शाखालाई स्थानान्तरण गर्ने हो । मर्जपछि कुनै सानो शहरमा दुईवटा शाखा छन् भने त्यसलाई गाभ्ने हो र त्यसको सट्टामा अर्को ठाउँमा शाखा खोल्ने हो । त्यसले गर्दा त वित्तीय पहुँच बढ्ने नै भयो । आफ्नो शाखा नभएको ठाउँमा नयाँ शाखा खोल्ने भनेको त आर्थिक गतिविधि बढ्ने हो । अनि सबै शहरमा, सबै गाउँमा बैंकका शाखाहरु त पुग्छन् तर सबै ठाउँमा एकदमै ठुला उद्योगहरु, व्यवसायहरु त पक्कै नहोलान् । त्यसकारण साना ऋणहरु नदिईकन त सुखै छैन, धरै हुँदैन ।
हामीलाई के थाहा छ भने ग्रामिण क्षेत्रमा लगानी गरेर त्यहाँको आयआर्जन बढायौं भने तिनीहरुले नै ठूला ठूला उद्योगबाट उत्पादन भएका वस्तुहरु प्रयोग गर्ने छन् । उनीहरुको क्रयशक्ति बढाउनको लागि त बैंकले काम गर्नुपर्छ । त्यसकारण सन्तुलित रुपमा हामी साना र ठूला क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार लगानी गर्छौं । एउटै क्षेत्रमा धेरै लगानी गर्ने पक्षमा हामी छैनौं । किनभने एउटै क्षेत्रमा धेरै लगानी गर्नुपनि ठूलो जोखिम हुनसक्छ । लगानीमा विविधिकरण गर्यौँ भने नै हामी त्यसै अनुसार सफल हुन सक्छौँ ।
सरकारले गतवर्षको बजेटबाट नै सहुलियतपुर्ण कर्जाको अवधारण सार्वजनिक गर्यो । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले इमान्दारितापूर्वक पालना नगरेको देखिन्छ । अर्कोतर्फ प्रक्रियागत झण्झट पनि उत्तिकै छन् ?
सरकारले घोषणा त गर्यो । ऋणको व्याजमा सहुलियत दिने कुरा त भयो । कतिपय ग्राहकहरुलाई त्यसबारे पूर्णज्ञान नै नभएको पाइयो । तर त्यस्तो होइन । म यो काम गर्छु । यसका लागि यति पैसा म आफैँ हाल्छु । नपुग पैसा बैंकसँग ऋण लिन्छु भन्ने कामको कार्ययोजना नै पाएनौँ । बैंकले दिएको ऋणलाई व्यवसायमा लगानी गर्ने र किस्ता–किस्ता गरेर तिर्ने खालको योजना लिएर आउन अनुरोध गर्दछु ।
एउटा निवेदनका भरमा ऋण पाइन्छ भनेजस्तो भएको छ । त्यसरी त बैंकले ऋण दिँदैन । अब हामीले गाउँ–गाउँमा गएर ऋण कसरी दिने ? त्यसका लागि कागजपत्रहरु कसरी तयार गर्ने ? त्यसका लागि बैंकिङ सचेतना बढाउने काम गर्नुपर्छ । स्थानीय तहमा रहेका संघसंस्थालाई यस काममा सहयोगी बनाउन पनि सकिन्छ । उनीहरुसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ ।
कतिपय ठाउँमा यस्ता डकुमेन्टेशनका शिक्षा दिने कामहरुपनि भएका छन् । खातापाता यसरी राख्ने हो । यसरी प्रपोजल बनाउने हो । यसरी काम गर्ने हो । नत्र लहडको भरमा काम गर्दा त उहाँहरु पनि डुब्नु हुन्छ र हामी पनि डुब्छौँ । त्यसकारण लहडको भरमा काम गर्नुहँदैन । सचेतनाका लागि हामीले काम गर्नुपर्छ । बैंकहरुले पनि त्यसतर्फ काम गर्नुपर्छ ।
कमजोर जीवन बीमा कम्पनीमा दर्ज भयो सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स, जम्मा ८३ करोडको व्यापार १ महिना पहिले
कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सरकारलाई नबिल बैंकको साथ, राहत कोषमा ६ करोड ५५ लाखको नगद योगदान १ महिना पहिले
गुण्डागर्दी गरेको अभियोगमा व्यवसायी डेबिट पक्राउ ७ मिनेट पहिले
तीन हजार क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र ७० प्रतिशत सम्पन्न १५ मिनेट पहिले